Indlela yokuvikela ingane izifo ezibangelwa amagciwane, indlela yokuqinisa bakhe kakade esibuthaka sokuzivikela ezifweni? Nazi ukukhathazeka ebalulekile abazali lanamuhla. Cabanga ngesizathu esenza nodokotela bezingane zezingane manje bazincome Echinacea. Iyingozi uma Echinacea izingane? Noma ingabe nje inganekwane, ezulazulayo phakathi abakhathazekile, bethukile abazali?
umzimba wengane ulula kakhulu, ngingakwazi nhlobo ukuzisiza ngokumelene amagciwane nezifo. Futhi lapho ucabanga ukuthi ingane njalo iqembu elikhulu (enkulisa, esikoleni), kuyacaca ukuthi kungani izingane sigule ngaso sonke isikhathi.
izibalo yezokwelapha Ikakhulukazi namuhla (nodokotela bezingane zezingane) umsindo alamu. Kunezinhlobo eziningana amaqembu impilo kwelinye isikhundla nodokotela bezingane banezingane eziphile kahle, omunye - izingane nge yezinkinga ezincane futhi ube iqembu ingozi. Ngakho, ngemva zonke izingane eminyakeni yamuva zanikezwa kula maqembu kwatholakala ukuthi izingane enempilo ayiqhubeki iphila. Ingane ngayinye likhombe ezithile zempilo.
It kuvela ukuthi isizukulwane sethu abasebasha kudingeka ivikelwe emandleni, kodwa ngaleso yezinyoni segolide hhayi ngibatshale. Ngakho-ke kubalulekile ukuba uqondise yonke imizamo ukuvikela izivikeli mzimba.
Abanye omama, ngemva kokubukela izikhangiso, ukuthenga yogurt. Kusuke kufanele kube njalo. ingane Ukudla kufanele nhlobonhlobo. Futhi uma izinkinga zezempilo okhethekile owawulapho ingane ingahambi njalo ezinyangeni 3-5 ekwelashweni esibhedlela, uthola amavithamini ngobungako kwesokudla, nokunikela iintlabagelo ezingeziweko ukuqinisa amasosha omzimba kuye noma yini.
Kodwa kwezinye izimo, into odokotela bethola okokuqala ukuthi batusa kakhulu ukuthi abazali ukunikeza Echinacea ingane. abazali Modern Akasekho zifa ukulalela iseluleko zodokotela (ngezinye izikhathi ngisho kahle), kanjalo sizokulalela ukuzazi thina ngokwethu ukuthi Echinacea kuyasiza izingane, kanjani futhi nini ukuyisebenzisa.
Echinacea, ukusetshenziswa izingane
Ngokuvamile, izingane zichayeke imikhuhlane izifo: sibi zokuphefumula isifo, SARS, Umkhuhlane. Ukwamukelwa Echinacea ukwandisa ukumelana lomzimba lezi kanye nezinye, izifo eziningi ezibangelwa amagciwane ezithathelwanayo. It kuqinisa amasosha omzimba. Ingabe ukulwa abanezifo, ukuvuvukala, sokuhlasela kwamasosha omzimba, izifo urological. Sekela umzimba ngesikhathi nokuvuselelwa, ngemva kokuhlaselwa elinamandla zokwelapha umzimba (kwemisebe, elwa namagciwane). okungukuthi Echinacea isenzo kungenziwa ngokuthi ngokubhukula. Futhi kuyasiza ezimweni eziningi. Ngisho ngoba ezishukumisayo isimiso sezinzwa, futhi ukusetshenziswa ongaphandle (isikhathi eside ukuphulukiswa amanxeba). Ngaphezu kwalokho, Echinacea unothile ngamavithamini, isibonelo lihambisana rosehip (umhluzi) kubalulekile ukuze ikhulise umzimba amavithamini ewusizo. It uhlala kuphela umbuzo ukuthi ungakusebenzisa kanjani endabeni izingane.
Echinacea izingane: Abazali Umhlahlandlela
Echinacea ikhiqizwa ngeendlela ezihlukeneko, kukhona imicimbi ekhethekile izingane: emalungiselelweni, e granules, ngefomu omisiwe, e-tincture.
Echinacea tincture utshwala, ngakho kuphela kulungele izingane ezindala (engaphezu kwengu-12 ubudala), bese buhlanjululwe in isilinganiso 1 kuya ku-3 (ingxenye eyodwa tincture nezingxenye ezintathu amanzi). Ngokuhamba kwesikhathi yengane baphuze amaconsi ambalwa alulaze tincture. Kufanele uthathe ngaphambi kokudla, izikhathi 3 ngosuku. Ukuze kuqiniswe umzimba ngokwanele baphuze ukumnika I-1 kuya ku-2 amaviki. Ukuze kusizwe ekwelapheni izifo ezithize - (! Njengoba udokotela uthi) amasonto 3-8. ukungaphathwa kahle imithi kuba sakugcina - vele ukusabela iguliswa nokuthi akuvamile! Into eyinhloko ukuthobela umthamo kanye singadluli ubude besikhathi ngokugcwele kule mfundo.
Echinacea izingane ezivela eminyakeni 4 ukuze uvikele ithebhulethi efanelekayo - Immunal (ukulungiselela yesimanje). Omunye Yiqiniso ngokuhambisana imiyalelo kanye nengane ngeke bagule ezinyangeni ezimbalwa. Futhi uma kakade iyagula, zilulame ngokushesha. isixazululo Immunala kungenziwa inikezwe izingane kusukela ngonyaka 1: 20 sehla kuze kube izikhathi 3 ngosuku.
iningi izingane ezincane (onyakeni) Echinacea isetshenziswa njengophawu Welding. Ungathenga ekhemisi omisiwe izimbali, amacembe noma izimpande Echinacea kanye phisa nemiyalo iphakethe.
Uma kukhona ukusabela nomzimba (Yebo Echinacea izingane musa njalo uvumelane), ukuqaphela ngezinzuzo zokuvivinya umzimba, lukhuni nezinye izindlela zemvelo ukuze uqinise amasosha omzimba, silondoloze amandla emzimbeni (rosehips, ama-raspberry, cranberry, aluhlaza okwesibhakabhaka).
"Bioparox" ku itheku. Ukwelashwa sinusitis "bioparoks" - Izibuyekezo
Cefazolin (imijovo). imfundo
Ukwakheka ukhonkolo isisekelo: abanesibalo ngayinye 1m3. I ukhonkolo isisekelo: ukwakheka
Ithumela Bemisebe 4. ITHOLAKALA KUPHI I-wiring e Bemisebe 4?
Igama indaba iqhawe "umzukulu Childhood Iminyaka Bagrov sika" Aksakov
Beetroot isitoreji egumbini elingaphansi komhlaba, noma kanjani ukunikeza ngokwabo nge imifino unyaka wonke
Mark UHenry: Biography of-wrestling American